राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि वाम एकता: भीम रावल – Everest Dainik
राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि वाम एकता: भीम रावल
काठमाडौं, असोज २५ । गणतन्त्र स्थापनापछि चार पटक गठबन्धन गर्दै फुट्दै गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मंगलबार एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यले पार्टी एकता गर्ने सहमति गरे। आकस्मिक रुपमा भएको वाम एकताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। विश्लेषकहरुले वाम एकतामा, सतहमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र देखिए पनि नेपथ्यमा चीनको भूमिका थियो समेत भनेका छन्। चीनले के वाम एकता चाहेको थियो र? एकतापछि चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको के प्रतिक्रिया प्राप्त भयो? नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलसँग शिशिर ढकालले यी प्रश्नको जवाफ खोजेका छन्।
आकस्मिक रुपमा वाम एकता किन भयो?
यो एकता आकस्मिक होइन, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन लगत्तै वाम एकताका लागि धैर लामो वार्ता र छलफल गरेका थियौँ। दस्तावेजहरु तयार गरेका थियौँ र एक भएर जाने टुंगो गरेका थियौँ। तर, कारणवश हुन सकेन। त्यसपछिका दिनमा पनि हामीले एकता र सहकार्यका लागि अनेकौँ चरणमा कुरा गरिरहेका थियौँ। कतिपय अवस्थामा सहकार्य समेत गर्दै आयौँ। अहिलेको सहकार्यका लागि पनि हामीले पटक-पटक कुराकानी गर्यौं। हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, नेपाली जनताको आकंक्षा र वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकरण गर्नैपर्ने युगको दायित्यवलाई ध्यानमा राखेर यो परिणाम आएको हो।
वाम एकताका सूत्रधार को-को हुन्?
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाएर हेर्न चाहने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्व र नेताहरुले वाम एकताका लागि योगदान गर्नुभएको छ।
माओवादी केन्द्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव समेत सामना गरेको एमालेले उसलाई फेरि कसरी विश्वास गर्‍यो?
माओवादी केन्द्रले एमालेको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको कुरा परिस्थितिले सिर्जना गरेको विषय भयो। अहिलेको विषय फरक छ। अहिले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोबाट अघि बढाउने, देशको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भावका लागि सँगै अघि बढ्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने साझा उद्देश्यका लागि दुई दल सँगै जानुपर्ने महसुस गर्‍यौं र यो सम्भव भयो।
जुट्दै फुट्दै गरेको एमाले-माओवादी गठबन्धन दीर्घकालीन हुने आधार के हो?
हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा नै विभाजन र मतभेदका अनेक शृंखला छन्। यो नेपालको राजनीतिको एउटा चरित्र बनेको छ। अहिले भने सर्वोपरी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाई नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुने संकल्प गरेका छौं। यो एकतामा नेपाली जनताको व्यापक समर्थन समेत प्राप्त भएको छ। यो नै हाम्रो सहकार्य दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने मुख्य आधार हो। फेरि लामो गृहकार्य र मन्थनपछिको परिणाम भएकाले अहिलेको एकतामा शंका गर्नुपर्ने आधार छैन।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले एमाले समाप्त गर्ने चुनौति दिएपछि त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिन वाम एकता भएको कुरा सत्य हो?
यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कसैलाई सिध्याउने, कसैलाई खत्तम पार्ने नकारात्मक उद्देश्यले हामीले एकता गरेका होइनौं। न त हामीलाई सिद्याउने भए भन्ने जगमा नै यो सहकार्य भएको हो। राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि परिवर्तनमा कटिबद्ध, समाजिक न्यायमा अडिग, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानप्रति प्रतिबद्ध पार्टीहरुले चुनाव जित्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो आशय हो। अब आउने निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ राज्य सञ्चालनको अभिभारा लिन्छौं भन्ने हाम्रो उद्घोष हो।
कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यागेका बाबुराम भट्टराईलाई वाम एकतामा कसरी समावेश गर्नुभयो?
राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो संविधानले कोरेका मार्गमा हिँड्न बाबुरामजी पनि तयार हुनुभयो। त्यसैले उहाँलाई समेत समावेश गराउनका लागि हामी तयार भएका हौँ।
वाम एकतापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया के छ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वाम एकतालाई राम्रै प्रतिक्रिया दिनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हालसम्म कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा केही भनेको अवस्था छैन। कुनै पनि देशमा त्यहाँको राजनीतिक दल मिल्छन्, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्ति हुन्छ भने त्यसले देशका लागि मात्रै होइन संसारकै लागि योगदान पुग्छ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु अवश्य पनि खुसी हुनेछन्।
कम्युनिस्ट एकता चाहने चीनको केही प्रतिक्रिया आएको छ?
चीनले कम्युनिस्टहरु एक हुन् मात्र भनेन। चीनले नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दीगो शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने पनि चाहेको छ। उसले हामीले त्यही चाहेका हौं भन्दै आइरहेकै हो।
वाम एकतामा सतहमा दुई पार्टी देखिए पनि नेपथ्यमा चिनियाँ दबाब थियो भन्छन् नि?
चीनले राजनीतिक दलहरु मिलेर नेपाललाई स्थायित्वको बाटोतर्फ अघि बढाएको हेर्न चाहेको कुरा बारम्बार गर्दै आएको हो। कुनै पनि असल छिमेकीले भन्ने कुरा त्यही नै हो। तर, चीनले राजनीतिक दलहरु मिलेको हेर्न चाहेको भन्दैमा उसले भनेका आधारमा हामी जुट्ने र फुट्ने कुरा हुन सक्दैन। हामी नेपाली जनताले आफ्नो निर्णय आफैं गर्छौं। हामीले आफ्नै विवेकले निर्णय गरेका हौँ। हामी कुनै देशले भनेर होइन, नेपालको धर्तीले भनेर, नेपाली जनताको ढुकढुकीले भनेर यो निर्णयमा पुगेका हौँ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीन जाँदा चिनियाँ पक्षले बृहत् वाम एकताको प्रस्ताव गरेको र त्यसैलाई अहिले मूर्त रुप दिइएको भन्ने तर्कबारे के भन्नु हुन्छ?
नेपालको पार्टी एकताका विषयमा कुनै कुरा भएको छैन। नेपालको आर्थिक समृद्धि र दुई पक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा मात्रै छलफल भएको हो। अध्यक्षको चीन भ्रमणमा चिनियाँ पक्षले कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकताको प्रसंग निकालेको थिएन। -नेपाल लार्इभबाट
ट्याग्स: vim rawol
पुस्तौँदेखि सञ्चालनमा रहेको सुन्दरीजलको पुरानो बाटो बन्द नगर्न मेलम्ची आयोजनासँग माग
यी हुन् नेकपाका प्रदेश ईन्चार्ज र अध्यक्ष [नामसहित]
प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीहरुले पनि कानून पढ्न पाउने व्यवस्था
बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा ४ सय युवालाई स्वरोजगारको तालिम सुरु
दीपक गौतमकाे प्रश्न– माइक्रोबसका यात्रुलाई कारमा कोच्दा दुर्घटना नभएर के हुन्छ ? (अन्तर्वार्ता)
चिनियाँ क्रान्तिका ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गर्दै प्रचण्ड (तस्वीरहरु)
पुलिसहरुको कमाउने धन्दा बनेको थियो दरबारमार्ग– डिएसपी मल्ल
माओको मुख्य आधार इलाकामा प्रचण्ड
निर्मला हत्याकाण्डः निलम्बित हुनेको संख्या पाँच पुग्यो, आज डिएसपीसहित चार प्रहरी निलम्बित !
खानेपानी मन्त्री एकाबिहानै काठमाडौँका अस्पताल निरीक्षणमा [फोटोफिचर]